ipad Archives - SmartMe
Dom » Soo-galitaannadoodii oo lagu calaamadiyey "ipad"
IPhone yar oo qiimo jaban leh. Waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in la tijaabiyo 12ka nooc ee mini-ga ah?
tufaaxa, iphone, iPhone 12 mini
Dhiirrigelin weyn dukaanka Neonet! Hada laga bilaabo, xoogaa la iloobay oo ay dayaceen macaamiisha daqiiqad xamaasad kadib, iPhone 12 mini ayaa lagu heli karaa qiimo aad u soo jiidasho leh! IPhone cusub oo qiimo dheeraad ah leh! Taleefanka gacanta ayaa hadda maraya PLN 2799. Ma ...
Apple waxay soo rogtay amarro lagu soo saarayo in ka badan 100 milyan oo iPhone ah 13!
IPhone-kii ugu dambeeyay wuxuu balan qaadayaa inuu noqon doono mid aad u xiiso badan waxaana jira tilmaamo badan oo muujinaya in baahida loo qabo qalabkan ay ka sareyso saadaasha Apple. Waa inaan qirnaa maqalka warbiximahan, waxaan horeyba ugu cadeynay ilkaheena casrigaan! Apple ayaa isku diyaarinaya ...
iPhone wuxuu awoodi doonaa inuu helo walxaha lumay. Kaliya maaha kuwa Apple ka yimid!
Apple waxay la timid fikrad kale oo cusub oo ah qaabka AirTags, oo loogu talagalay inay ka caawiso helitaanka waxyaabaha lumay. Alaabooyinka waxaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo codsadaha Goobta iyo shaqada Findy My. Apple ma aha mid caajis ah, in kastoo ...
Qaabka cusub ee Apple ee qiime xayeysiin ah. Iibsasho mudan?
tufaaxa, iphone, iPhone 12 mini, dallacsiinta
Dhawaanahan, waxaa jiray hadal hayn badan oo ku saabsan moodeelka yar yar ee loo yaqaan 'iPhone 12 mini', oo in kasta oo uu yar yahay, sida ay codsadeen adeegsadayaal badani, aanu dareen badan ku abuurin suuqa casriga ah. Hada laga bilaabo, sheyga Apple waxaa laga iibsan karaa ...